सिंचाइ मोटर र मलखाद खोसेर किसानमाथि दमन गरिएको सीके राउतको आरोप – Nepal Press
२०७८ मंसिर १५ गते १७:११
जनकपुरधाम । किसानहरूले खेतीका लागि जसोतसो सिँचाइ र मलखादको प्रबन्ध गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रहरीले गरिरहेको दमन गरिरहेको भन्दै जनमत पार्टीले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सीके राउतले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै किसानमाथिको दमन रोक्न नेपाल प्रहरी र विद्युत प्राधिकरणसँग अनुरोध गरेका हुन् । वैकल्पिक सहज व्यवस्था नगरिकन अझै पनि किसानहरुको सिंचाइ मोटर र मलखाद खोस्ने कार्य गरे जनमत पार्टी आन्दोलनमा उत्रिने विज्ञप्तिमार्फत उनले चेतावनी दिएका छन् ।
किसानको सिँचाइ मोटर खोसिदिने, प्रहरी लगाएर कुटपिट गर्न लगाउने, पक्राउ गर्न लगाउँने, मलखाद ल्याउँदा अनावश्यक यातना दिने, घुस माग्ने र नदिए आधा बोरा मलखाद पनि जफत गर्ने गरेको आरोप अध्यक्ष डा. राउतले विद्युत प्राधिकरण र प्रहरीमाथि लगाएका छन् ।
‘आफ्नो परिवार र बालबच्चाको जीवन धान्न खेती नगरी नहुने अवस्थामा रहेका किसानहरू सरकारले सिंचाइ र मलखादको उपयुक्त व्यवस्था नगरीदिँदा मारमा मात्रै पर्दै आएका छैनन्, उनीहरूको पूरै परिवारको जीवन नै संकट र भोकमरीले ग्रस्त हुने अवस्थामा रहेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: २०७८ मंसिर १५ गते १७:११